အပျိူကြီးမမအုံပုန်း – Grab Love Story
ကျွန်တော်အပင်ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဗျ မနက်ပိုင်းနေရောင်အောက်မှာထဘီရင်ရှားနဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ရေငင်နေတာဘယ်လောက်ကျက်သရေရှို လိုက်မလဲဆိုတာကိုတွေးကြည့်ကြပေါ့ဗျာ ဆံပင်အရှည်ကြီးကိုသားရေကငွ်းလေးန့စဲ ည်းပြီ့းအနောက်မှာထုံးထားပြီးတော့ ထဘီယောဂီရောင်လေးန့ကဲုန်းပြီးရေငင်နေတာဗျာ ကျွန်တော့်မှာအဲဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်ပြီးတော့တံတွေးတွေပဲမျိူချနေရတယ် နေရောင်အောက်ကအလင်းကျနေတာရယ်ထဘီရင်ရှားထားတာနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်ကလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်အ သားအသားရောင်ကကျွန်တော့်ကိုရိုက်ခတ်နေပြီဗျ ထဘီကိုရင်ရှာထားတာတောင်သူ့ထဘီကသူ့ရဲ့ရင်သားတွေကိုနိုင်အောင်မစည်းနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ ရင်သားတစ်ဝက်လောက်ကဟင်းလင်းပြင်ကြီးနဲ့ ကျွန်တော်အဲဒီခဏလေးအတွင်းမှာအသက်တောင်မရှူရဲတော့ဘူး တစ်ကယ်ပဲဗျာအပျိူကြီးကရိုးသားလိုက်တာ သူ့ဟာသူမန်မာနတွေမရှိပဲရေတွင်းနားမှာရေငင်နေလိုက်တာများ။
ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာအဲဒီလိုရေတွင်းနားမှာရေငင်နေတဲ့အပျိူကြီးရဲ့ခြေရင်းအောက်မှာသွားပြီးတော့ထဘီ ခေါင်းထဲကိုဝင်ပြီးမာမာဝင်းရဲ့စောက်ပတ်ကြီးကိုအားရပါးရယက်လိုက်ချင်တဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဗျာ တကယ်တမ်းလက်တေ့မွှာတော့လက်ကအလိုလိုလီးကိုကိုင်မိနေတာလေ အပျိူကြီးကတော့ရေငင်တာရေပုံးထဲပြည့်သွားပြီဆိုမှရေချိူးတာ ရေပုံးကရေကိုရေခက်ွန့တဲ ခက်ွချင်းယူပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုလောင်းချလိုက်တယ် ဆယ်ခွက်ဆယ့်ငါးခွက်လောက်သူ့ကိုယ်ပေါ်ကိုကျေနပ်အောင်လောင်းချလိုက်တယ် ပြီးမှတစ်ကိုယ်လုံးကိုဆပ်ပြာတိုက်တော့တာပဲ ပြီးတော့ဆပ်ပြာတွေစင်အောင်ရေလောင်းချတယ် ဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့မှ ပေါင်ကြားကိုဘယ်လက်န့နှဲိုက်ပြီးတော့ရေလောင်းချတယ် ပေါင်ကြားကိုလေးငါးချက်လောက်တော့ပွတ်ဆေးတယ် ကျွန်တော့်အစ်မရေချိူးရင်ပွတ်ဆေးတာနဲ့မတူဘူး ကျွန်တော့်အစ်မကတော့တစ်ကိုယ်လုံးချွတ်ပြီးတော့ချိူးရလို့လားမသိဘူး။
အပျိူကြီးရေချိူးတာန့မဲ တူတာကအစ်မကစိမ်ပြေနပြေချိူးတာ အပျိူကြီးကတော့သိပ်မကြာဘူး ပေါင်ကြားကိုလက်န့ပဲ တ်ွပြီးတော့တစ်ကိုယ်လုံးကိုရေလေးငါးခွက်လောက်လောင်းချပြီးတော့ပြီးသွားတာဗျ ပြီးတော့မှအိမ်အောက်မှာထဘီလှဲလိုက်တာဗျ အဲဒါကျတော့ကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူး အဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မန်းကျည်းပင်မှာဂွင်းတိုက်ပြီးသွားပြီ လရည်တွေကိုမန်းကျည်းပင်အောက်ကိုစိုက်ချလိုက်တယ် အပျိူကြီးလည်းရေ၀တ်လဲပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားတော့မှကျွန်တော်လည်းမန်ကျည်းပင်အောက်က ဆင်းလိုက်တယ် အိမ်ကိုရောက်တော့ထမင်းတောင်မစားချင်တော့ဘူး တစ်ခါတည်းတန်းအိပ်လိုက်တာ ညနေသုံးနာရီလောက်မှနိုးလာတော့တယ် ညဘက်ရောက်တော့အပျိူကြီးတို့အိမ်ဘက်ကိုသွားချောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ကျွန်တော်ခွေးဝင်ပေါက်က၀င်ပြီးတော့အိမ်သာနားကိုကပ်လိုက်တယ် ထဘီတန်းပေါ်မှာအတွင်းခံဘောင်းဘီတထည်လှန်းထားတာတွေ့တယ်။
အနက်ရောင်အကြီးကြီး။ ကျွန်တော်ယူပြီးတော့တခါတည်းနမ်းပြီးဂွင်းတိုက်လိုက်တယ် ပြီးသွားလို့လရည်တွေထွက်လာတော့ အဲဒီဘောင်းဘီခွကြားမှာပန်းချလိုက်တယ် အရသာရှိလိုက်တာဗျာ အပျိူကြီးစောက်ပတ်ရှိတ့ေဲ နရာလေးမှာကျွန်တော့်လရည်တွေကိုပန်းထည့်ရတာ စောက်ခေါင်းထဲကိုလရည်ပန်းသလိုပဲ အပျိူကြီးစောက်ပတ်န့ကျွဲန်တော်လရည်တေကွ ပ်နေတာဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲကျွန်တော်ဂွင်း တိုက်ပြီးသွားတော့စိတ်ကမပါတော့ဘူး မချောင်းတော့ပဲအိမ်ပြန်ပြီးအိပ်လိုက်တော့တယ် မနက်ကျတော့အပျိူကြီးတို့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာလိုက်တယ် မန်းကျည်းပင်ပေါ်ကနေအပျိူကြီးရေချိူးတာကိုကြည့်ချင်လို့ ဒီနေ့တော့ချောင်းခွင့်မကြုံဘူး အပျိူကြီးအိမ်နောက်ဘက်မှာ ဘာရှာနေလဲမသိဘူး ကုန်းကုန်းကကွ နွ့ ဆဲိုတော့သူ့ဖင်ကြီးကအနောက်ဘက်ကိုကားစွင့်နေလိုက်တာဗျာ “အန်တီ ဘာရှာနေတာလဲအန်တီ” ”သံမိူုလိုက်ရှာနေတာညီညီဇော်ရယ်”။
”ငါ့အခန်းကတံခါးကမကောင်းတော့နည်းနည်းပြင်လို့လေ“ ကျွန်တော်ကလည်းမဆိုင်းမတွ “အန်တီလိုချင်ရင်ကျွန်တော့်အိမ်မှာရှိတယ်ဗျ ခဏနေဦးအန်တီကျွန်တော်သွားယူပေးမယ်” ချက်ချင်းအိမ်ကနေယူပြီးပေးလိုက်တယ် “တလက်စတည်းညီညီဇော်ရယ် ငါ့အခန်းတံခါးကိုပါတခါတည်းပြင်လိုက်ရအောင်” ”ရတယ်လေအန်တီကူပေးပါ့မယ်“ ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပျော်နေမလဲဆိုတာကိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော် ”ဒါန့နှဲစ်ယောက်သားအခန်းတံခါးရှေ့မှာရပ်ပြီးတူတစ်လက်နဲ့သံရိုက်မယ့်နေရကိုရှရတာပေါ့ ကျွန်တော်လည်းအခွင့်အရေးရတုန်း သံကိုအပြင်ကမရိုက်ပဲအခန်းထဲကိုခပ်တည်တည်ဝင်ပြီးတော့ရိုက်မယ့်နေရာမှာဒူးထောက်ပြီးထိုင်ချလိုက် တယ် အခန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာထဘီတန်းကြီးရှိတယ် အရမ်းကိုကျက်သရေရှိတဲ့နေရာပေါ့ဗျာ ဟိုတစ်ညကကျွန်တော်လရည်တေပွ န်းခ့တဲ့ေဲ ဘာင်းဘီလေးကလိပ်ပြီးတော့ထဘီပေါ်မှာတင်နေတာ ဒါဆိုကျွန်တော့်လရည်တွေအပျိူကြီးခံစားရပြီပေါ့။
ကျွန်တော်လည်းအဲဒါတွေကိုမြင်ချင်တော့သံကိုအချိန်ဆွဲပြီးတော့ရိုက်နေတာ သံမိူကိုတမင်ကောက်သွားအောင်ရိုက်ထည့်တဲ့အခါလည်းလုပ်ရတာပေါ့ “ဟဲ့ညီညီဇော် ခဏနေဦးဟဲ့ သစ်သားလေးတစ်ခုန့ခဲံထားမှရမှာဟဲ့ခဏနေဦးမရိုက်နဲ့ဦး“ ဆိုပြီးအောက်ကိုသစ်သားရှာဖို့ဆင်းသွားတယ် ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့အကွက်ကောင်းပေါ့ ကျွန်တော့်လက်ကထဘီတန်းပေါ်ကအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုအမြန်လှန်းယူလိုက်တယ် ပြီးတော့ခွကြားနေရာကိုအငမ်းမရနမ်းလိုက်တယ် မရတော့ဘူး ကျွန်တော်တစ်ကိုယ်လုံးကိုလေထဲလွင့်နေသလိုပဲဗျာ အပျိူကြီးရဲ့စောက်ပတ်အနံကိုရလိုက်တာ ကျွန်တော့်လက်ကလီးကိုကိုင်ပြီးဂွင်းတိုက်နေပြီဗျာ ပြီးတော့အပျိူကြီးထဘီတွေကိုပါနမ်းလိုက်တယ် ကျွန်တော်အဒဲီလိုလုပ်လို့ကောင်းနေတ့အဲ ခါမှ အခန်းဝမှာအပျိူကြီးကကျွန်တော့်ကိုကြက်သေသေပြီးတော့ကြည့်နေတာဗျ ကျွန်တော့်လီးကလည်းတန်းလန်းကြီးနဲ့ လက်ထဲမှာလည်းသူ့ဘောင်းဘီလေး ဟ့ညဲီညီဇော်နင်ဘာလုပ်နေတာတုန်း။
ငါ့ဘောင်းဘီကို…. အန်တီ့ဘောင်းဘီလေးကိုမြင်တော့နမ်းချင်တာနဲ့ယူနမ်းကြည့်တာပါအန်တီ ”နမ်းစရာလားဟ့အဲဒါ” ”ဟုတ်က့ကျွဲန်တော့်အတက်ွဒီဟာလေးကနမ်းစရာပါအန်တီ အန်တီ့စောက်ပတ်အနံ့ကိုနမ်းချင်လို့စောက်ပတ်ရှိမယ့်ဒီဘောင်းဘီခွကြားလေးကိုနမ်းပြီးဂွင်းတိုက်နေတာပါ အန်တီ” ကျွန်တော်လည်းမထူးဇတ်ခင်းနေရပြီဗျ ကျွန်တော်ရှေ့ကိုတစ်လှန်းတိုးပြီးအပျိူကြီးထဘီကိုအောက်အနားစကနေပြီးဆွဲလှန်လိုက်တယ် အပျိူကြီးကလည်းဒီလိုလုပ်မယ်လို့ထင်မထားလို့ကြောင်နေမိတယ် အပျိူကြီးနောက်ဆုတ်ချိန်တောင်မရလိုက်ဘူး အလစ်မှာခံလိုက်ရသလိုဖြစ်သွားတော့တာဗျ ထဘီလှန်လိုက်တော့အပျိူကြီးစောက်ပတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော့်စိတ်တွေလုံးဝထိန်းလို့မ ရတော့ဘူး အိုး ………. စောက်မွှေ့းတွေဆိုရင်နည်းနည်းနောနောမှမဟုတ်တာ ကျွန်တော့်ခေါင်းကလည်းအပျိူကြီးစောက်ပတ်နားကိုရောက်သွားပြီးတော့အငမ်းမရကိုနမ်းနေတာ အပျိူကြီးနောက်ကိုဆုတ်လိုက်သေးတယ်။
ဒါပေမယ့်မရတော့ဘူးဗျ ကျွန်တော်ကသူ့ပေါင်ကိုဖက်ထားလို့ ”ဟ့နဲ င်ဘာလုပ်နေတာလဲ” အဲဒီလိုပြောနေချိန်မရတော့ဘူး ကျွန်တော်လျှာကသူ့စောက်ပတ်ကိုဆွဲငုံလိုက်ပြီ ကျွန်တော့်လျှာန့အဲ ပျိူကြီးစောက်ပတ်န့ထဲိသွားတော့အပျိူကြီးတစ်ကိုယ်လုံးတုန်နေသလိုပဲ အပျိုကြီးပါးစပ်ကဘာမှတောင်မပြောနိုင်တော့ဘူး ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအတင်းဆွဲဖယ်နေတယ် ကျွန်တော်လည်းလုံးဝမရတော့ဘူးလေအပျိူကြီးစောက်ပတ်ကိုပဲမဲပြီးတော့ငုံထားတာ ငံကျိကျိအရသာတွေကိုကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကိုအကုန်ထည့်လိုက်တယ် အဲဒီအချိန်မှာပဲအပျိူကြီးဒူးထောက်ပြီးတော့ထိုင်ချလိုက်တယ် ပြီးတော့ခေါင်းကိုကြမ်းခင်းမှာထားလိုက်တော့ကျွန်တော်အရမ်းပျော်လိုက်တာဗျာ အပျိူကြီးဘယ်လောက်ခံချင်နေမလဲဆိုတာကို အဲဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်စောက်ပတ်ကိုဆွဲငုံထားတာ အပျိူကြီးစောက်မွှေးတွေကိုပြတ်ထွက်မတတ်ကိုဆွဲထားတာလေဗျာ အပျိူကြီးမနေနိုင်တော့ဘူးဗျ။
ခေါင်းထောင်လာပြီးတော့ ကျွန်တော့်လီးကိုမီးပွင့်မတတ်မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည့်နေလိုက်တာဗျာ ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ကြည့်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ် လက်န့မဲ ထိတထိလေးအရင်ကိုင်ကြည့်တယ် ပြီးတော့မှလီးကိုဖြစ်ညှစ်လိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော့်လီးကိုသူ့မျက်နှာရှေ့မှာကျွန်တော့်လီးကို သူ့ပါးစပ်အ၀မှာမှေးတင်ထားလိုက်တယ် အန်တီကိုကျွန်တော်လဲခိုင်းလိုက်တယ် သူ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တက်ခွလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ဖင်ကသူ့နို့တွေပေါ်မှာတင်တင်စီးစီးကိုနေရာယူလိုက်တယ် အပျိူကြီးဘာမှခိုင်းစရာတောင်မလိုဘူး ချက်ချင်းလီးကိုပါးစပ်ထဲကိုထည့်လိုက်တာ ငုံထားတာဗျ ပြီးမှဖီးတက်လာတယ်ထင်ပါရဲ့ လက်န့ကဲိုင်ပြီးတော့မှအသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးလိုက်တာကျွန်တော့မှာကော့ တက်သွားတယ် ကျွန်တော့်မှာအိပ်မက်လို့တောင်ထင်နေတာဗျာ ခဏလေးအတွင်းမှာ ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်ထုတ်ပြီးတော့ အပျိူကြီးစောက်ပတ်ကြားမှာ။
မုဆိုးဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးအပျိူကြီးစောက်ပတ်ရှေ့ မှာတေ့လိုက်တယ် ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ကစောက်ပတ်လိုးဖူးတဲ့ကောင်မှမဟုတ်တာဗျာ ခက်တော့ခက်ပြီဗျာ ကိုဇော်ကြီးကတော့ပြောဖူးတယ် အဲဒါတွေကိုလည်းမမှတ်မိတော့ဘူး ”အန်တီ ကျွန်တော်အန်တီ့ကိုဘယ်လိုလိုးရမလဲဗျ” ”နင်စောက်ပတ်လိုးဖူတယ်မဟုတ်လား” ”ကျွန်တော်တစ်ခါမှစောက်ပတ်မလိုးဖူဘူးအန်တီ” “ပေးစမ်းဟာနင့်လီးကိုဒီအပေါက်ထဲကိုထည့်ရတာဟဲ့“ ပြောရင်း ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးတော့သူ့စောက်ပတ်ထဲကိုစွတ်ခနဲထည့်လိုက်တာ ကျွန်တော့်လီးကသူ့စောက်ပတ်အ၀မှာခဏလောက်ထောက်နေသေးတယ်ဗျ ပြီးတော့မှသူ့စောက်ရည်တွေန့ထဲိကပ်ပြီတော့အတင်းကိုဝင်သွားတာ မလုပ်တတ်တော့လီးကိုအဲဒီလိုပဲစောက်ပတ်ထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့မှကြောင်နေတာကိုးဗျ နောက်တော့မှအပျိူကြီးကျွန်တော့်ဖင်ကိုကိုင်ပြီးလီးအ၀င်အထွက်ကိုထိန်းပေးလိုက်တော့မှ။
ကျွန်တော် သဘောပေါက်သွားတာ ကောင်းလိုက်တာဗျာ စောက်ပတ်အဆုံးထိကိုဝင်သွားတာဗျ ကျွန်တော်အငြိူးတကြီးန့ေဲ ဆာင့်ပြီးတော့လိုးနေတယ် အပျိူကြီးတဟင်းဟင်းနဲ့အိပ်ယာခင်းတေကွိုဆွဲညှစ်ပြီးတော့ခေါင်းတွေကိုဘယ်ညာယမ်းပြီးတော့လီးအရသာ ကိုခံစားနေတာ ကျွန်တော်လည်းလုပ်ချင်သလိုသာလုပ်နေတာ လုပ်တတ်တာတော့မဟုတ်ဘူး အပျိူကြီးတစ်ယောက်အရှက်မရှိတော့ဘူး ပါးစပ်ကကောင်းလိုက်တာ အဲဒီလိုအဆုံးထိဝင်အောင်ဆောင့်လိုးစမ်းပါညီညီဇော်ရယ် အဲဒီလိုလုပ်မှငါကအားရတာဟဲ့ညီညီဇော်ရယ် ကျွန်တော်လည်းလီးန့လဲိုးနေရင်းနဲ့ ပါးစပ်ကိုပါအပျိူကြီးနို့တွေကိုကုန်းစို့နေလိုက်တာဘယ်လိုအရသာရှိမှန်းကို မသိတော့ဘူး ကျွန်တော်လည်းအပျိူကြီးဂျိူင်းမွှေးတွေကိုပါစုပ်ထည့်လိုက်တော့အပျိူကြီးကျွန်တော့်ကိုကုပ်ထားလိုက် တာကျွန်တော့်ကျောတွေပေါက်ထွက်မတတ်ပါပဲ ကျွန်တော်နေ့ပေါင်းများစွာ မျှော်လင့်ခ့ရဲ တဲ့။
အပျိူကြီးမာမာဝင်းရဲ့စောက်ပတ်ကြီးကိုတကယ်တမ်းလိုးနေရတဲ့အ ခါကျတော့မယုံနိုင်ပါဘူး တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာက လိုးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ ဥပမာပြောရရင်ဗျာ မာမာဝင်းစောက်ပတ်ကိုယက်ချင်တယ်ဗျာ အပျိူကြီးစောက်ပတ်ကိုမြင်ဖူးချင်တယ် အပျိူကြီးဖင်ပေါ်မှာမှောက်အိပ်ချင်တယ်ဗျာ ကျွန်တော်တပ်မက်တာဒီလောက်ပါပဲ လိုးရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့လေ ခုတော့ကျွန်တော်လိုးနေရပြီလေ အပျိူကြီးမာမာဝင်းကိုလိုးနေရတာဗျဘယ်လောက်ထိအိပ်မက်ဆန်လိုက်သလဲဗျာ အပျိူကြီးစောက်ပတ်က်ိုကျွန်တော်လိုးနေရပြီ အပျိူကြီးစောက်ပတ်ကိုကျွန်တော်ယက်ဖူးပြီးပြီယက်နေရပြီလေ ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာတ့ဘဲ ၀လေးလည်းဗျာ အဲဒီလိုလိုးနေရတ့အဲ ချိန်မှာကျွန်တော့်ကိုအပျိူကြီးကကျောကိုပဲအသေကုပ်ထားတာဗျ သူ့စောက်ပတ်ထဲကိုအားရှိပါးရှိဆောင့်ထည့်လိုက်တိုင်းကုတ်လိုက်တာကျွန်တော့်ကျောပြင်တွေတောင်ပြတ် ထွက်မတတ်ပဲ။
ကျွန်တော်လည်းမလိုးတတ်လိုးတတ်န့လဲိုးရဖို့သာအဓိကထားပြီးတော့လိုးနေတာပဲ ကျွန်တော်အရင်ပြီးသွားတယ် အပျိူကြီးကကျွန်တော်ပြီးလို့လရည်တွေသူ့အထဲကိုပန်းပြီးတော့မှပြီးသွားတာ သူပြီးသွားတာလဲကြောက်စရာပဲ သူပြီးခါနီးတော့ကျွန်တော့်ကျောကိုပဲအသေကုတ်ဆွဲထားတယ် တဟင်းဟင်းနြဲ့ငိမ်သွားတယ် ကျွန်တော်အပျိူကြီးကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်နေလိုက်တယ် အပျိူကြီးကကျွန်တော့်ကျောကိုဖက်ထားပြီးတော့ “ညီညီဇော်ရယ် ခုနကနင်ငါ့ဘောင်းဘီကိုကိုင်ပြီးလုပ်နေတာတွေ့ရတော့ငါ့တစ်ကိုယ်လုံးဘာဖြစ်သွားမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဟာ “အန်တီရယ် အန်တီ့ဘောင်းဘီလေးကိုကျွန်တော်နမ်းနေတာကြာပါပြီအန်တီရယ် ခုဒီဘောင်းဘီမှာကျွန်တော်ဟိုတစ်နေ့ကလရည်တွေကိုခွကြားမှာပန်းခဲ့တာကိုအန်တီက၀တ်ပြီးချွတ်ထားခဲ့ တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်ပဲဖြစ်သွားတာအန်တီ“ “ဟယ် တကယ် နင်ဘယ်တုန်းကအဲဒီလိုလုပ်လိုက်တာလဲ“။
“ညဘက်ဆိုရင်အန်တီတို့ခြံကိုလာပြီးတော့အန်တီသေးပေါက်တာကိုချောင်းပြီးဂွင်းတိုက်နေတာကြာပြီအန်တီ “ဟယ်ဒီကောင်လေးကတော့ငါရှက်လိုက်တာနော် သေးပေါက်တာကိုချောင်းကြည့်တယ်ဆိုတော့” “ဟိုတစ်နေ့ကတော့အန်တီ့ဘောင်းဘီမှန်းသိတော့နမ်းပြီးဂွင်းတိုက်ပြီးမှလရည်တွေကိုခွကြားမှာပန်းခဲ့တာ“ “နင်ကငါ့ဘောင်းဘီမှန်းဘယ်လိုသိလဲ“ “အန်တီရယ် အန်တီ့ဖင်နဲ့ အန်တီညီမဖင်န့ကဲ တခြားစီပဲလေအန်တီ“ “ပြီးတော့ကျွန်တော့်အိမ်မှာအန်တီ့ဘောင်းဘီတထည်ရှိသေးတယ်“ “ဒါဆိုဟိုတစ်လောကငါ့ဘောင်းဘီတထည်ပျောက်သွားတာနင့်လက်ချက်ကိုး“ “ဟုတ်ပါတယ်အန်တီရယ် အန်တီကိုအရမ်းလိုးချင်နေလို့ခုလိုဖြစ်ရတာပါ“ “ကေဲ လ ခုတော့နင်လိုချင်တာဖြစ်ခြဲ့ပီမဟုတ်လား ငါလည်းနင်လုပ်နေတာကိုမြင်တော့ငြင်းနိုင်စွမ်းလည်းမရှိတော့ပါဘူးဟယ်“ အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်ကဆင်းခိုင်းတယ် ပြီးတော့အ၀တ်အစားတွေပြန်ဝတ်နေတယ်။
ကျွန်တော်လည်းပုဆိုးကိုပြန်ဝတ်ပြီးတော့ အန်တီကိုဖက်ထားလိုက်တယ် အန်တီမျက်နှာလေးကိုနမ်းလိုက်တယ် အန်တီလည်းကျွန်တော့်ကိုပြန်နမ်းတယ် “ညီညီဇော်ရယ်ခုလိုဖြစ်တာကိုနင်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောနဲ့နော် တစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်ရင်ငါသေရလိမ့်မယ်“ “စိတ်ချပါအန်တီရယ် အန်တီ့ဖင်ကိုမြင်ဖူးတာကိုတောင်ကျွန်တော်ဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပါဘူး“ “ပြီးတော့ကျွန်တော်ညအိပ်ရင်အန်တီ့ဘောင်းဘီလေးကိုနမ်းပြီးစကားပြောတာကိုလည်းဘယ်သူ့မှ မပြောဖူးဘူးအန်တီ“ “နင်ကငါ့ဘောင်းဘီကိုဘယ်လိုစကားတွေပြောလဲ“ သူတော်တော်ငြိသွားတဲ့ပုံပဲ “အန်တီ့ဘောင်းဘီလေးကိုကိုင်ပြီး အန်တီရယ် ကျွန်တော်အန်တီကိုလိုးပါရစေ အန်တီစောက်ပတ်ကိုယက်ပါရစေအန်တီဖင်ကိုကိုက်ပါရစေဆိုပြီးတော့ပြောတာအန်တီရယ်“ “နင်ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ချင်တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ“ “သိပ်တော့မကြာသေးဘူးအန်တီ ကျွန်တော်ဂွင်းတိုက်တတ်တော့မှ အန်တီ့ဖင်ကိုမှန်းရင်းန့အဲ ဒဲီလိုဖြစ်သွားတာ“။
“ကျွန်တော်ညတိုင်းလိုလိုအန်တီဖင်ကိုမြင်ပြီးဂွင်းတိုက်တယ်“ “နင်ငါ့ကိုအိမ်သာကနေချောင်းတာကဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ“ “အတူတူပဲအန်တီ ဂွင်းတိုက်တတ်ပြီးမှပါ“ “အန်တီရယ်ကုတင်ပေါ်ကိုတက်လိုက်ရအောင်အန်တီနော်“ “အေးပါ ခဏနေဦးဟဲ့ငါအပြင်ထက်ွပြီတံခါးပိတ်လိုက်ဦးမယ်“ ဆိုပြီးအပြင်ကတံခါးကိုသွားပိတ်နေတယ် ပြင်ဝင်လာတော့ကျွန်တော့်ကိုတစ်ချက်ပြုံးပြတယ် ကျွန်တော်လေဲ နတ့ကဲုတင်ပေါ်ကိုတက်လာတယ် ကျွန်တော်အန်တီ့ကိုဖက်ထားလိုက်တယ် ပြီးမှအန်တီတစ်ကိုယ်လုံးကိုနမ်းလိုက်တယ် အန်တီ့ထဘီအထက်ဆင်ကကိုင်ပြီးကျွန်တော်ဖြေချလိုက်တယ် ဗိုက်ကိုအရင်နမ်းလိုက်တယ် ပြီးမှချက်ကိုပြင်းပြင်းဆွဲစုပ်လိုက်တယ် ဗိုက်သားအောက်ကဆီးခုံကိုနှခေါင်းန့ေဲ တ့ကပ်ပြီးနမ်းလိုက်တယ် နောက်ဆီးခုံပေါ်ကတောထနေတ့အဲ မွှေးတေကွိုနမ်းပြီးမှပါးစပ်နဲ့ဆွဲငုံပြီးမှစောက်ပတ်နှခမ်းသားကိုလျှာနံဲ့ယက် လိုက်တော့အန်တီ့ဖင်လုံးကြီးကပါပေါ်ကိုမြောက်တတ်လာတယ်။
အန်တီပါးစပ်ကတော့တဟင်းဟင်းန့အဲ သံတွေထွက်လို့ ကျွန်တော်လျှာကစောက်စိလေးကိုဆွဲငုံလိုက်တော့ “ညီညီဇော်ရယ်အဲဒီအတိုင်းပဲလုပ် အဲဒီလိုလုပ်တာပိုကောင်းတယ် ” ကျွန်တော်လည်းအဲဒီအတိုင်းပဲသူ့စောက်စိလေးကိုလျှာနဲ့ဆွဲစုပ်လိုက်သပ်ပေးလိုက်နဲ့လုပ်လိုက်တော့အန်တီ တစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီဗျ ပြီးသွားတယ်ဆိုပေမယ့်ကျွန်တော်ကသူ့စောက်စိကနေ နေရာမရွှေ့သေးတော့သူကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုကိုင်ပြီးဆွဲဖယ်လိုက်တယ် ”ခဏလေးညီညီဇော်ရယ်အန်တီမနေတတ်တော့လို့“ကျွန်တော်လည်းသူ့ပေါင်ကြားမှာထိုင်လိုက်တယ် သူ့လက်လေးန့ေဲ စာက်ပတ်ကိုမထိတထိလေးပဲ သူအဲဒီလိုလုပ်နေတာ စောက်ဆီခံနေတာဗျ ကျွန်တော်သိတယ် မရဘူးဗျသူ့ကိုဆက်လုပ်ပေးချင်တ့စဲိတ်ကများလာတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသူ့စောက်စိလေးကိုခုနကအတိုင်း ပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ် ဒီတစ်ခါတော့သူမငြင်းနိုင်တော့ဘူး စောက်ပတ်အတွင်းသားတွေကိုပါကျွန်တော့်လျှာနဲ့ထိုးမွှေပေးလိုက်တယ်။
ပြီးတော့မှအပျိူကြီးကိုကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်ခိုင်းလိုက်တယ် “ကျွန်တော့်လီးကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်သလိုလုပ်ပေးပါလားအန်တီရယ်” “အင်းပါဟေ့ငါလည်းနင်ဟာကိုမြင်ရင်နေနိုင်တော့ဘူး“ “နင်ငါ့ကိုယ်ပေါ်ကဆင်းလိုက် နင့်ကိုယ်ပေါ်ကိုငါတက်လိုက်မယ်“ ပြောရင်းအပျိူကြီးဖင်ကြီးကကျွန်တော့်မျက်နှာရှေ့မှာတင်ပါးတွေကိုနမ်းတယ် ပြီးတော့မှရှေ့မှာရောက်နေတ့ေဲ စာက်ပတ်ကြီးကိုအားရပါးရဆွဲစုပ်ထားတယ် အပျိူကြီးလည်းကျွန်တော့်လီးကိုစုပ်နေတာ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားတွေကိုပါယက်ပေးတော့ကျွန်တော့်မှာကောင်းလိုက်တာဗျာ ကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တာန့အဲ န်တီရယ်လိုးကြရအောင်နော်အန်တီ “အင်းပါညီညီဇော်ရယ် ငါလည်းမနေနိုင်တော့ဘူး” နှစ်ယောက်သားအလူးအလဲထလိုက်ကြတယ် အပျိူကြီးကဒီတစ်ခါကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှာ ပထမတစ်ခေါက်ကလိုကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူး ကိုယ့်လီးကို သူ့စောက်ပတ်အ၀မှာတေ့ပြီးတော့သွင်းလိုက်တယ်။
စောက်ရည်တွေများရွှဲနေတာပဲဗျာ ကျွန်တော်လည်းဒီတစ်ခါအိုကေတော့သိပ်မလောတော့ဘဲနဲ့သူ့စောက်ပတ်ကိုမှိန်းပြီးတော့လိုးနေလိုက်တယ် အပျိူကြီးလည်းတော်တော်ကောင်းပြီ ပါးစပ်ကအသံတေကွ တော့တဟင်းဟင်းန့အဲ ဆက်မပြတ်ကိုထွက်နေတာ နောက်တော့ကျွန်တော်လိုးရှိန်တက်လာတော့ခပ်မြန်မြန်ပဲလိုးလိုက်တော့တယ် ခဏနေတော့အပျိူကြီးပြီးချင်သလိုလိုဖြစ်နေပြီဗျ ကျွန်တော့်ကျောကိုအတင်းကုတ်နေပြီ ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့မယ်ဆိုပေမယ့်အပျိူကြီးအရင်ပြီးသွားတယ် “အား ညီညီဇော်ရယ် ငါပြီးပြီ ငါပြီးပြီ“ လို့ပြောပြီး ကျွန်တော့်ကျောကိုဆွဲကုတ်လိုက်တာ နောက်လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်လိုက်တော့မှကျွန်တော်ပြီးသွားတယ် လရည်တွေကိုအပျိူကြီးစောက်ခေါင်းထဲကိုပန်းထည့်လိုက်တယ် ကျွန်တော့်မျက်နှာကတော့အပျိူကြီးမျက်နှာပေါ်မှာမှောက်ရက်ကြီး အဲဒီလိုခဏနေပြီးတော့မှ ”ဟ့ညဲီညီဇော်ငါရေချိူးချင်လာပြီ“ “ကျွန်တော်လည်းအတူတူပါပဲအန်တီ“။
“အေးးဒါဆိုရင်လည်းနင်လည်းအိမ်ပြန်ပြီးရေချိူးထမင်းစားပြီးတော့မှပဲစကားလေးဘာလေးပြောဖို့ပြန်လာခဲ့ လိုက်” ပြေရင်းဆိုရင်းအပျိူကြီးအ၀တ်တွေပြန်ဝတ်ပြီးတော့အပြင်ကိုထွက်လိုက်မှ ကျွန်တော်က ”ထမင်းစားပြီးရင်ထပ်လုပ်ဦးမလားအန်တီ” ”စကားပြောပြီးမှပဲစဉ်းစားမယ်ဒါပေမယ့်ညနေစောင်းရင်ဟိုနှစ်ယောက်လာရင်မရဘူးနော်ကောင်လေး” “ဟုတ်က့အဲ န်တီ ကျွန်တော်အမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့မယ်” “အမလေး ဘယ်လိုဖြစ်နေလိုက်တာလဲတစ်ခါတည်းမှပဲ” “အန်တီ့ကိုအရမ်းလိုးချင်လို့ပါအန်တီ” ကျွန်တော်အဲဒီလိုပြောပြီးအိမ်နောက်ဘက်ကနေလှစ်ခနဲထွက်လာလိုက်တာ အိမ်ကိုရောက်တော့ရေချိူးခန်းထဲကိုဝင်ပြီးစောက်ရည်တွေပေပွနေတဲ့မျက်နှာကိုဆေးရမှာတောင်မှနှမြောသ လို အဲဒီလောက်တောင်ဖြစ်တာဗျ ရေခွက်ကိုကိုင်ပြီးတော့သီချင်းအကျယ်ကြီးအော်ဆိုလိုက်တယ် ပြီ့းမှရေချိူးချလိုက်တယ် ပျော်လိုက်တာလေ အန်တီမာမာဝင်းကိုလိုးခဲ့ရလို့ လိုးပွဲခံလိုက်တယ်။
အပျိူကြီးန့ကျွဲန်တော်န့ထဲ ပ်တူကျသွားပြီဗျ သိတယ်မဟုတ်လား တစ်ဘက်မှာအပျိူကြီးရေချိူးနေသလို ကျွန်တော်လည်းဒီမှာရေချိူးနေတာလေ ပြီးရင်ထမင်းစားကြမယ် ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်တဲ့အရသာလဲဗျာ ပြီးရင်နှစ်ယောက်အတူတူစိတ်ထလာရင်လိုးပွဲဝင်ကြဦးမှာလေ ရေချိူးပြီးလို့ထမင်းစားလို့တောင်မ၀င်တော့ဘူးဗျာ ဆက်မစားတော့ပဲအန်တီတို့အိမ်ဘက်ကိုကူးလိုက်တယ် အနောက်ပေါက်က၀င်လိုက်တယ် အိမ်ပေါ်ကိုရောက်သွားတော့အန်တီကထမင်းစားတုန်း ”ဟ့ေဲ ကာင်လေးနင်ကမြန်လှချည်လား” ”မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရယ် ကျွန်တော်ထမင်းစားလို့လဲမရတော့ဘူးအန်တီရယ် အဲဒီလောက်ထိတောင်မစောင့်နိုင်တော့ဘူးသိရဲ့လားအန်တီရဲ့” “ဟင်းဟင်း နင်ကနှာဘူးအသေးစားလေးပဲသိလား” “အန်တီ့ကိုလိုးချင်လို့နှာဘူးဖြစ်လာတာလေအန်တီ“ “အန်တီကျွန်တော့်ကိုချစ်လားဟင်အန်တီ“ “နင်ကငါ့သားလောက်ပရှဲိတာဟဲ့အေးဒီလိုအခြေအနေရောက်လာတော့မှချစ်ရတော့မှာပေါ့”။
“တကယ်နော်အန်တီ” “အင်းပါ ကဲလာလာ ထမင်းတော့စားလိုက်ဦး“ ဆိုပြီးသူ့လက်လေးနဲ့ကျွန်တော့်ကိုခွံကျွေးတာဗျ ကျွန်တော်လည်းသူခံွေ ကျွးတော့စားရတာပေါ့လေ ချက်ချင်းအပျိူကြီးမာမာဝင်းန့ကျွဲန်တော်လင်မယားဘ၀ကိုရောက်သွားတာဗျ အဲဒီလိုစားနေရင်းနဲ့အပျိူကြီးပါးကိုလည်းနမ်းလိုက်သေးတယ် အပျိူကြီးကတော့ရှက်လိုက် ခပ်တည်တည်နေလိုက်န့ေဲ ပါ့ ပါးပြင်ပေါ်ကသနပ်ခါးနံ့သင်သင်းလေးကလည်းကျွန်တော့်ရင်ကိုအေးသွားတာပဲ ရေချိူးပြီးစဆိုတော့အအေးဓါတ်ကလေးကလည်းပါတာပေါ့လေ “အန်တီရယ်ထမင်းမစားပါန့ေဲ တာ့အန်တီရယ်“ “အေးပါနင်လုပ်တော့မှငါလည်းအစားပျက်ရတော့မယ်“ “ဒီထက်ကောင်းတ့ဟဲာကိုစားမလို့ပါအန်တီရယ်” ထမင်းဝိုင်းသိမ်းပြီးတော့မှအခန်းထဲကိုအမြန်ဝင်လိုက်ကြတယ် ရောက်ရောက်ချင်းပဲအပျိူကြီးကိုအနောက်ကနေဖက်ထားပြီးတော့ထဘီကိုကိုင်ပြီးဖြည်ချလိုက်တယ် အပျိူကြီးဖင်ပြောင်ကြီးနြဲ့ဖစ်သွားပြီ။
ကျွန်တော်အနောက်ကနေဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတော့အပျိူကြီးဖင်တွေကိုနမ်း လိုက်တယ် ဖင်တေကွိုလက်န့ဖျဲစ်လိုက် ခပ်ဖဖွွေ လးရိုက်ကြည့်လိုက်န့ကျွဲန်တော့်စိတ်ကူးထဲကအတိုင်းလုပ်နေမိတယ် ဖင်အကွဲကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းဟပြီးတော့ဖင်ပေါက်လေးကိုပါလျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက်တော့ မတ်တတ်ရပ်နေတ့အဲ ပျိူကြီးတစ်ကိုယ်လုံးဖြည်းဖြည်းချင်းကုန်းကျလာတယ် လက်ကိုကုတင်တန်းန့ထဲိန်းပြီးတော့ကုန်းချလိုက်တယ် အဲဒီတော့မှစောက်ပတ်လေးကပြူးပြီးပေါ်လာတော့တာပဲ ကျွန်တော်ဖင်ပေါက်ကိုယက်ပေးပြီးတော့စောက်အကွဲကြောင်းလေးကိုလျှာနဲ့အပြားလိုက်ကြီးယက်ပေးလိုက် တော့အပျိူကြီးတစ်ကိုယ်လုံးအရှေ့ကိုတိုးကပ်သွားတယ် ကျွန်တော်လျှာကိုအနားမပေးပဲစောက်ခေါင်းဝတစ်ခုလုံးကိုပါဆွဲငုံထားတာအပျိူကြီးကောင်းလွန်းလို့ ကုတင်ပေါ်ကိုမှောက်ရက်ကြီးလဲသွားတာဗျ ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်ချင်းပက်လက်လှန်လိုက်တယ် ပြီးမှအငမ်းမရစောက်စိကိုဆွဲငုံတော့တာပဲ။
ခဏနေရင်အပျိူကြီးပြီးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိနေတယ်ဗျ အိပ်ယာခင်းကိုလက်နဲ့အတင်းဆွဲနေပြီ ပြီးတော့ခြေထောက်တွေကမငြိမ်တော့ဘူး ဒူးဆစ်အောက်ပိုင်းလောက်ကဆန့်လိုက်ကွေးလိုက်နဲ့ဖြစ်လာပြီ နောက်ထပ်စောက်စိလေးကိုဆြွဲပီးလျှာန့ေဲ မွှပေးလိုက်တာနဲ့တကိုယ်လုံးတုန်တက်ပြီးတော့အပျိူကြီး တစ်ခေါက်ပြီးသွားပြီ ဒီတစ်ခေါက်သူ့ကိုစောက်ဆီခံအောင်မစောင့်တော့ဘဲချက်ချင်းကျွန်တော့်လီးကိုသူ့စောက်ပတ်မှာ တည့်ပြီးတော့သွင်းချလိုက်တာချောခနဲဝင်သွားလိုက်တော့ အပျိူကြီးဘယ်လောက်တောင်ကောင်းသွားမလဲမသိဘူး တစ်ခေါက်ပြီးတာန့လဲီးဝင်လာတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြီးဖို့ကိုစိတ်ကအလိုလိုရောက်သွားပြီလေ ကျွန်တော်လည်းတောက်လျှောက်လိုးတော့တာပဲ ဒီတစ်ခေါက်စိတ်ရှီလက်ရှီကိုဆောင့်လိုးလိုက်တယ်သူ့လက်တွေကျွန်တော်ဖင်ကိုကိုင်ပြီးတော့လီးအ၀င် အထွက်ကိုထိန်းပေးနေတယ် “ကောင်းရဲ့လားအန်တီ“ “အင်း ကောင်းလွန်းလို့သေတော့မှာပဲဟာ“။
“မြန်မြန်လေးဆောင့်ပေးစမ်းပါကောင်လေးရယ် နောက်တစ်ခေါက်ပြီးချင်နေပြီဟာ“ “ငါ့မှာလီးအရသာကိုအခုမှခံစားနေရတာဟဲ့ နင့်လီးကိုတစ်နေကုန်စိမ်ထားလိုက်ချင်တော့တယ်ဟာ“ ကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပြောချိန်မရတော့ဘူး ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့မှာပဲ နောက်ထပ်လေးငါးချက်လောက်ဆောင့်လိုက်တော့နှစ်ယောက်အတူတူပြီးသွားတာဗျ ”အန်တီပြီးသွားတယ်မဟုတ်လား “ “အေး ပြီးသွားတယ်“ “ကောင်းတယ်မဟုတ်လားအန်တီ” “ကောင်းလွန်းလို့ငါလည်းမြော့နေပြီကောင်လေးရယ်” ဒီတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်လည်းအန်တီအတိုင်းပဲ နည်းနည်းတော့ပျိူင်းသွားပြီဗျ နှစ်ယောက်စလုံးကိုယ်လုံတီးန့ပဲ က်လက်လှန်ပြီးစကားမပြောနိုင်သေးပဲမှိန်းလိုက်ကြတယ် ကျွန်တော်ခြေထောက်တွေကအပျိူကြီးကိုခွလိုက်ပြီး “အန်တီကိုကျွန်တော်တစ်ခုမေးချင်တယ်အန်တီ“ “ဘာမေးမှာလည်း” “ကျွန်တော်တို့ဂွင်းတိုက်သလိုအန်တီတို့ကောအဲဒီလိုမျိူးလုပ်တယ်မဟုတ်လား”။
“လုပ်တာပေါ့ဟ့ဒဲါသဘာဝပေဲ လ“ “အဲဒီလိုလုပ်ရင်အန်တီဘယ်သူ့ကိုမှန်းလဲဟင်အန်တီ“ “ငါကငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေကိုတစ်ခါတစ်လေမှန်းတယ်” ”ပြီးတော့အပြင်သွားလို့ကိုယ်သဘောကျတ့ေဲ ယာက်ကျားမျီူးတွေ့ရင်လည်းအိမ်ကိုရောက်ရင် မှန်းလိုက်တာပဲ“ “ခုဆိုရင်အန်တီဘယ်သူ့ကိုမှန်းမှာလည်းဟင်” “ဟားဟား နင်ကတော်တော်လည်တ့ဟဲာလေးပါလား ခုချိန်မှာမှန်းစရာမှမလိုပါဘူးလေ ခုနင်ရှိနေပြီပဲလေ ဒီမှာလေ ငါမှန်းစရာမလိုတော့တ့ဟဲာလေး“ ကျွန်တော့်လီးကိုတစ်ချက်ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ်ဗျ “အန်တီကျွန်တော်န့မဲ နက်ဖြန်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲလား” ”ငါသွားစရာမရှိဘူးဆိုရင်လာခ့လဲိုက်လေ ငါလည်းနေနိုင်မယ်မထင်ဘူးကောင်လေးရယ် ငါယောက်ကျားမယူခ့တဲာမှားမှန်းသိသွားပြီကောင်လေးရယ်” ကျွန်တော့်နဖူးလေးကိုခပ်ဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တော့ကျွန်တော်အရည်ပျော်ကျသွားပြီ “ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိနေပြီပဲအန်တီရယ်“။
“နင်ရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့်ငါတို့ကလူသိအောင်နေလို့ရတာမှမဟုတ်တာကောင်လေးရယ် ဒါတောင်တစ်ယောက်ယောက်သိသွားရင်တော့ငါ့ဘ၀ကတော့သွားပြီ” “မဟုတ်ဘူးလေအန်တီအန်တီ့န့ကျွဲန်တော်အတူတူအမြဲနေမှာပေါ့အန်တီကလည်း“ “နင်ကတော့လွယ်မှာပဲလေ ထားလိုက်ပါတော့လေ ငါ့အဖြစ်နဲ့ငါပါကောင်လေးရယ်” ကျွန်တော်အပျိူကြီးကိုအရမ်းသနားသွားလိုက်တာဗျာ သူ့လိုအသက်ကြီးကြီးမိန်းမတစ်ယောက်ကကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ဒီလိုအခြေအနေရောက်သွား တာကိုတော်တော်လေးကိုခံစားနေတဲ့ပုံပါပဲ“အန်တီ့ကိုကျွန်တော်အရမ်းချစ်တယ်သိလား“ ကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားလိုက်တော့အန်တီဘာမှပြန်မပြောပဲပြူံးရုံပဲပြူံးပြတယ် ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုသူ့လက်ချောင်းလေးတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးပွတ်ပေးနေတယ် ကျွန်တော့်အန်တီ့ရင်ခွင်ထဲမှာခေါင်းထိုးထည့်ပြီးတော့နို့နှစ်လုံးကြားမျာမျက်နှာကိုမှောက်ချလိုက်တယ်။
အန်တီ့နို့သီးခေါင်းလေးကကျွန်တော့်ပါးစပ်နဲ့လက်မလောက်လေးပဲလိုတော့တယ် လျှာန့တဲို့ကြည့်လိုက်တယ်ပြီးမှကျွန်တော့်နို့သီးခေါင်းလေးကိုမှေးပြီးစို့နေလိုက်တယ် အန်တီကတော့ကျွန်တော့်ခေါင်းကိုပဲပွတ်ပေးနေတယ် ကျွန်တော်စိတ်ပြန်ကြွလာတော့ပြီဗျ ပြီးတော့တစ်ချီပြီးသွားပေမယ့်နှစ်ယောက်လုံးကနေရာရွှေ့ကြသေးတာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်အန်တီ့နှခမ်းဖောင်းဖောင်းလေးကိုဆွဲစုပ်လိုက်တော့အန်တီလျှာက ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကိုလူးလွန့်ပြီးတော့ဝင်လာတာဗျ ကျွန်တော်တော်တော်ဖီးတက်သွားတယ်ဗျ အန်တီကနှခမ်းချင်းစုပ်တာကတော့နည်းနည်းကြုံဖူးသလိုပဲ ကျွန်တော်ကအဲဒါကိုလုပ်ဖူးတာမဟုတ်တော့မသိဘူးလေ ကျွန်တော်လည်းအားကျမခံအန်တီကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲကိုသွင်းသလိုမျိူးသူ့ကိုပါလုပ်ပေးလိုက်တော့သူလည်း ကျွန်တော့်အတိုင်းပဲ ကျွန်တော်အန်တီ့ဂျိူင်းမွှေးတွေကိုဆွဲစုပ်ပြီးတော့ဂျိူင်းသားတွေကိုပါလျှာနဲ့ယက်ပေးလိုက် နှိ့ကုန်းစို့လိုက်န့ဆဲိုတော့လီးကတော့ပြန်တောင်လာပြီဗျ။
ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခါတော့သိပ်တောင့်မနေတော့ဘူးဗျ တောင်တယ်ဆိုရုံလေးတောင်လာတာ အန်တီကကျွန်တော့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်သွားတဲ့ပုံစံနဲ့ ”နင်ကတကယ်ပဲ တောင်ပဲတောင်နိုင်လွန်းတယ်” ဆိုပြီးလီးချီးမွန်းခန်းဖွင့်တယ် ကျွန်တော့်လီးကိုအန်တီ့နှခမ်းဝမှာတေ့ကပ်လိုက်တော့အန်တီကအလိုက်တသိလေးဖွဖွလေးငုံပြီးတော့ လျှာလေးန့ညဲ င်ညင်သာသာလေးစုပ်ပေးနေတာ “ကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ် အဲဒီလိုမျိူးလေးပဲလုပ်ပေးပါအန်တီရယ်“ “အေးသိပ်လည်းဇိမ်ခံမနေန့ဥဲီး ဒီမှာငါ့ဟာလည်းယားတက်လာပြီဟ” ကျွန်တော်လည်းအဲဒီစကားကြားရတော့အချိန်မဆွဲပဲနဲ့ပေါင်ကြားမှာဒူးထောက်ပြီးတော့သူ့စောက်ပတ်ဝကိုလီး ကိုတေ့ပြီးတော့သွင်းချုလိုက်တယ် အန်တီဆီကငြီးသံတွေထွက်ကျလာတယ်ဗျ ”ကောင်လေးရယ်ဒီတစ်ခါတော်တော်ကောင်းနေပါလားကွယ်“ “ကျွန်တော်လည်းအရမ်းကောင်းနေပြီအန်တီရယ်“ “ကောင်လေးရယ်ကောင်းကောင်းဆောင့်ပေးစမ်းပါဦးကွယ်“။
ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းကြာအောင်ဆောင့်ပြီးလိုးနေရတယ်ဗျ ရှေ့မှာပြီးထားခဲ့ကြပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်အန်တီကိုလေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် အဲဒီလိုကုန်းလိုက်တော့မှအန်တီရဲ့ရာဝင်ဖင်လုံးကြီးကကျွန်တော့်ကိုအသည်းခိုက်သွားပြီ ကျွန်တော်အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲစောက်ပတ်ထဲကိုမြန်မြန်ထည့်ပြီးတော့ ဖင်ကိုကိုင်ပြီးတော့ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်လိုးလိုက်တာ နှစ်ယောက်လုံးအတူတူပြီးသွားကြတာပေ့ါ အန်တီ့လည်းတော်တော်မောသွားတယ်ထင်ပါတယ် သူ့ခမျာကျွန်တော့်အလိုကိုလိုက်နေရတာ သိပ်ပြီးတက်တက်ကြွကြွမရှီတော့ဘူး ဒီတစ်ခါသူကစောက်ဆီခံနေသလို ကျွန်တော်လည်းလီးကိုမထုတ်သေးပဲလီးဆီခံနေလိုက်တယ် ခုတစ်ခေါက်ပြီးသွားတော့တော်တော်လည်းကိုနုံးသွားပြီဗျ ထတောင်မထချင်တော့ဘူး “ကဲကောင်လေး သုံးနာရီကျော်ပြီးနော်အိမ်လေးဘာလေးပြန်ဦး“ ”ဟုတ်ပါပြီအန်တီရယ်ပြန်မှာပါ“ “အန်တီကိုချစ်လို့အန်တီန့အဲ တူတူစကားတွေေ ပြာနေချင်လို့ပါအန်တီရယ်”။
“အင်းပါကောင်လေးရယ်သိပါတယ်ကွယ် အိမ်ကလူတွေကလေးနာရီခွဲဆိုရင်ရောက်ကြတော့မယ်လေ” ကျွန်တော်လည်းအင်းကျီနဲ့ပုဆိုးကိုကောက်ဝတ်လိုက်တယ် အန်တီကတော့ကုတင်ပေါ်မှာလဲနေတုန်းပဲ ကျွန်တော်အန်တီ့ပါးကိုနမ်းလိုက်ပြီးတော့ အန်တီ့ဘရာဇီယာလေးကိုကောက်ယူပြီးတော့အန်တီ့ကျောပြင်မှာတပ်ပေးလိုက်တယ် ပြီးမှအင်းကျီဝတ်ပေးတယ် အန်တီရယ်နေတယ် သဘောကျတာလားဘာလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမေးမကြည့်တော့ဘူး ကုတင်အောက်ကကြမ်းခင်းမှာပုံနေတ့ထဲ ဘီကိုကောက်ပြီးကျွန်တော့်နှခေါင်းရှေ့မှကပ်ပြီးတစ်ချက်ကောက်ရှူ လိုက်သေးတယ် အန်တီကုတင်ပေါ်ကဆင်းလာတော့အန်တီကိုကျွန်တော်ထဘီစွတ်ပေးပြီးတော့ဝတ်ပေးလိုက်တယ် ဖင်ကြီးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ဆွဲညှစ်လိုက်သေးတယ်ဗျ ဒီတစ်ခါတော့အန်တီကကျွန်တော့်ပါးကိုဖွဖွလေးလိမ်ဆွဲတယ် ”အန်တီကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်”။
အန်တီကျွန်တော့်ပါးကိုနမ်းတယ် ကျွန်တော်လည်းပြန်နမ်းတယ် “ကျွန်တော်မနက်ဖြန်လာခဲ့မယ်နော်” “အင်းပါနောက်ဖေးပေါကပဲဝင်လာနော် ကောင်လေးနော်” “ဟုတ်က့ပဲါအန်တီစိတ်ချပါမနက်ဖြန်ဒီနေ့ထက်ပိုပြီးလုပ်ကြရအောင်နော်” “ဟားဟားဒီညနေကိုတောင်ငါဒေါင်းတော့မယ်ထင်တယ်” “ပြန်ပြီနော်အန်တီ“ “အေးအေး“ ကျွန်တော်အိမ်ကိုပြန်တက်တော့ဒူးချောင်နေတယ်ဗျသိလား လှေကားလက်ရန်းကိုကိုင်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းတက်နေရတယ် အခန်းထဲရောက်တော့မှဒီနေ့ဖြစ်လာတာတွေကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခုထိကိုမယုံနိင်သလိုပဲ ကျွန်တော်တို့တစ်ရပ်ကွက်လုံးကယောက်ကျားတွေသည်းခြေကြိုက်အပျိူကြီးမမကြီးကိုကျွန်တော်နဲ့ အနမ်းမိုးတွေရွာလိုက် ချစ်ပွဲတေနွ လွှဲိုက်န့လဲုပ်ခငွ့်ရတာကျွန်တော်မှန်းသိလေကျွန်တော့်မှာအသားလွတ်ကိုပျော်လေပဲဗျာကျွန်တော် နေ့ချင်းညချင်းဟီရိုးကြီးဖြစ်သွားခြဲ့ပီပေါ့ ခေါင်းဦးအောက်ကဘောင်းဘီလေးကိုယူပြီးတော့နမ်းလိုက်သေးတယ်။
သူ့ခမြာအားငယ်နေရပြီဗျ သူ့ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့သူလည်းရှက်နေမှာပေါ့ ဟေးဘောင်းဘီလေးမင်းပိုင်ရှင်ကိုငါယူလိုက်ပြီကွသိရဲ့လားဆိုပြီးဘောင်းဘီလေးကိုခေါင်းအုံးအောက် ထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ရေချိူးခန်းထဲမှာစိမ်ပြေနပြေချိူးပြီးတော့ညနေစာပါတစ်ခါတည်းစားလိုက်တော့တယ် အစ်မလည်းမရှိဘူးကျူရှင်လစ်သွားပြီထင်ပါရဲ့ ခဏအပြင်မှာထိုင်ပြီးအပျိူကြီးန့ဒဲီနေ့ဖြစ်ခ့တဲာတွေကိုတပြုံးပြူံးနဲ့စဉ်းစားနေလို့ကောင်းတုန်းအဖေနဲ့အမေရုံး ကပြန်လာကြပြီ “ဟ့သဲားလေးဒီနေ့အိမ်မှာတောင်ရှိနေပါလား မှန်စမ်းနေမကောင်းဘူးလား“ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော့်နဖူးကိုစမ်းကြည့်တယ် “မဟုတ်ပါဘူးအမေရယ်ကျွန်တော်နေ့ခင်းကဘောလုံးသွားကန်လိုက်လို့ပါ” “အေးအေးပြီးရောဒါဆိုရင်လည်းနင့်ကိုကြည့်ရတာနုံးနေသလိုပဲ“ အိမ်ရှေ့ကထိုင်ခုံလေးမှာထိုင်ပြီးအပြင်ကိုငေးကြည့်နေလိုက်တယ် စိတ်ကတော့အပျိူကြီးဆီကိုပဲရောက်နေတာဗျသိလား။
ခုတောင်တစ်ခေါက်လောက်အိမ်ရှေ့နားကနေ ဖြတ်လျှောက်ကြည့်ချင်လာတယ် ကျွန်တော်ခုံလေးပေါ်ကထပြီးအပျိူကြီးအိမ်ရှေ့ကနေဖြတ်လျှောက်ကြည့်တော့အိမ်ရှေ့မှာသနပ်ခါးအဖွေး သားန့ထဲိုင်နေတ့ကျွဲန်တော့်ရဲ့ ချစ်လှစွာသောအပျိူကြီးမမကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော့်မှာပျော်လိုက်ရတာ နေ့ခင်းကမှလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လိုးထားတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို ညနေပြန်တေ့ွေ တာ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းမသိဘူးဗျဆွဲပြီးတော့ဖက်နမ်းလိုက်ချင်တယ် သူကျွန်တော့်ကိုမြင်တယ် သူ့ထုံးစံအတိုင်းပြုံးပြတယ် လှလိုက်တာအန်တီရယ် အဲဒီလိုမျိူးတစ်သက်လုံးသာနေလိုက်ချင်တော့တယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းသွားအဖွေးသားကြီးပေါ့သူတို့ အိမ်ရှေ့မှာမယောင်မလည်န့ခဲ ဏလောက်နေပြီးမှနည်းနည်းမှောင်လာလို့မီးတွေထွန်းလိုက်တော့မှအိမ်ကိုပြန် လာပြီးတော့တစ်ခါတည်းအိပ်လိုက်ပါတော့တယ် မနက်ဖြန်ကျရင်ချစ်သူအကြီးကြီးန့ခဲံစားမှုအသစ်တွေဖန်တီးရဦးမယ်လေဗျာ …….. ။
ညဘက်အိပ်လို့တောင်ပျော်ပါ့မလားမသိဘူး ခုချိန်ထိတော့ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာနေ့ခင်းကလိုးပွဲကြီးခင်းကြတာကိုမြင်ယောင်နေတုန်းပါ ခုလိုညမျိူးဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်သလဲဗျာဒီအချိန်ရောက်ရင်အိမ်သာအနောက်ကိုသွားစရာမ လိုတော့ဘူး ဘယ်သူတွေရေချိူးမလဲဆိုတာကိုလည်းတကူးတကစောင့်နေစရာမလိုတော့ဘူး ပူပူနွေးနွေးချစ်သူအကြီးကြီးတစ်ယောက်တောင်ရှိနေပြီလေဗျာဘာလိုသေးလို့လဲခုလိုညမျိူးမှာ ချစ်တယ်အန်တီရယ်……….. မနက်ဖြန်ကျမှအန်တီ့ကိုဒီနေ့ထက်ပိုပြီးချစ်ပြရဦးမယ် ကျွန်တော်အိပ်တော့မယ်နော် အိပ်ပျော်နိုင်ပါစေအန်တီ……. မနက်ပိုင်းကျွန်တော်အိပ်ယာကနိုးတော့ရှစ်နာရီတောင်ထိုးနေပြီ ကျွန်တော်မနက်စာစားမလို့ပြင်နေတော့အစ်မဖျော်ပေးတဲ့လဘက်ရည်ကိုသောက်ပြီးအီကြာကွေးတစ်ချောင်း န့လဲ က်စသတ်ပြီးတော့အ်ိမ်ပြင်ကိုထက်ွပြီးအန်တီမာမာဝင်းတို့အိမ်ဘက်ကိုမသိမသာစောင့်ကြည့်နေ လိုက်တယ်။
ဟိုလင်မယားနှစ်ယောက်ကဈေးမသွားသေးဘူးလေ အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အခန်းထဲပြန်အောင်းနေလိုက်တယ် အစ်မကတော့အပြင်သွားမလားတော့မသိဘူးအ၀တ်အစားတွေကတော့အိမ်နေရင်းအ၀တ်တွေမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော်ဘာမှမေးမနေတော့ပဲကုတင်ပေါ်မှာပဲနှပ်နေလိုက်တယ် ခဏလောက်နေမှအစ်မက “မောင်လေးနင်အပြင်သွားမယ်ဆိုရင်သော့ခတ်ပြီးမှသွားနော်ငါဒီနေ့နည်းနည်းကြာမှာသိလား“ “အင်းပါမလေးရယ်ကျွန်တော်မမေ့ပါဘူး” “ဒါဆိုရင်လည်းငါသွားပြီနော်“ အစ်မထွက်သွားပြီးမှကျွန်တော်အိမ်တံခါးတွေအကုန်ပိတ်ပြီးတော့မှအိမ်နောက်ဘက်ကိုခြေဦးလှည့် လိုက်တယ် အန်တီတို့အိမ်အနောက်ဘက်ကိုရောက်တော့ချက်ချင်းအိမ်ပေါ်ကိုမတက်သေးပဲမန်ကျည်းပင်ပေါ်တက်နေ လိုက်တယ် ခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပြီးမှအိမ်ပေါ်ကိုတက်လာလိုက်တယ် ဘယ်သူမှမရှိဘူးလားမသိဘူး “အန်တီရယ် အန်တီမာမာဝင်း “ “ကောင်လေးဘာလို့အော်နေရတာလဲအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့လေ“။
ကျွန်တော်ဝမ်းသာအားရ၀င်ချလိုက်တယ် ကုတင်ပေါ်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ချစ်သူအကြီးကြီးကတစ်ကိုယ်လုံးဗလာကျင်းပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေတာ တ့ဗျဲာ ကိုယ်လုံးတီးန့မဲိန်းမတစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေတာကိုမြင်ရရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်မလဲဗျာ ကျွန်တော်လည်းလူထဲကလူသားပါပဲ ကျောက်သားမှမဟုတ်တာပဲ အဲဒီမြင်ကငွ်းကိုမြင်လိုက်တာန့ကျွဲန်တော်ဘာမှမပြောတော့ဘူး ချစ်သူအကြီးကြီးရဲ့ပေါင်ကြားထဲကိုဝင်ပြီးကျွန်တော့်ခေါင်းကိုအတင်းထိုးထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော့်အပျိူကြီး ရဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးကိုတစ်ခါမှမနမ်းဖူးတ့လဲူတစ်ယောက်လိုနမ်းမိနေတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ချစ်တ့ကဲိုယ်လုံးကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အရူးတစ်ယောက်လိုဖြစ်သွားပြီ ဘာမှန်းကိုမသိတော့ဘူး “အန်တီရယ်ကျွန်တော်နောက်ကျသွားလို့ပါနော်” “ဟားဟား အကုန်သိပြီးသားကောင်လေးမန်းကျည်းပင်ပေါ်တက် ကတည်းကမြင်ပြီးသား ဒါကြောင့်ဒီလိုပုံစံမျိူးစောင့်နေလိုက်တာ“ အန်တီ့လက်တွေကကျွန်တော့်ခေါင်းကိုပဲဆွဲဖွနေတယ်။
“ကောင်လေးလေး ကောင်လေးကိုအရမ်းချစ်လို့ဒီလိုလုပ်လိုက်တာသိလား“ “တကယ်ပဲလားအန်တီရယ်“ “ကောင်လေးရယ်ခုထိမယုံသေးဘူးလားကွယ်“ “မဟုတ်ပါဘူးအန်တီရယ် ကျွန်တော်ကအန်တီ့ကိုပိုချစ်လို့ပါအန်တီရယ်“ ”အန်တီကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိလို့ဒီလိုပြောလိုက်တာပါ“ “ကောင်လေးကကလေးလေးအတိုင်းပါလားကွယ် ကဲကဲ ဒါဆိုရင်လည်းအရှူံးပေးပါတယ်နော်” ဆက်ပြီးကျွန်တော်သူကြိုက်တ့ပဲုံစံအတိုင်းစောက်စိလေးကိုငုံပြီးလျှာနဲ့ကလိလိုက်တယ် သူ့ဒူးနှစ်ဘက်န့ကျွဲန်တော့်ကိုညှပ်ထားလိုက်တာ ကျွန်တော်လည်းသူအဲဒီလိုစိတ်ပါလာတာကိုသိလိုက်တော့ကျွန်တော်ကိုယ်အောက်ပိုင်းသူ့မျက်နှာရှေ့ကိုခွ လိုက်ပြီးတော့သူ့စောက်စိလေးကိုအပေါ်ကနေဆွဲစုပ် သူကလည်းကျွန်တော့်လီးကိုငုံပြီးဥတွေကိုပါစုပ်ပေးတော့ကျွန်တော့်မှာကောင်းလွန်းလို့ ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ခုလုံးစောက်ရည်တွေပေပွနေပြီဆိုမှသူ့ခြေရင်းပြန်ဆင်းပြီးတော့အန်တီ့ပေါင်ကိုကား ခိုင်းပြီးမှ။
အဲဒီပေါင်ကြားမှာကျွန်တော်လီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တယ်မဆောင့်သေးပဲအဲဒီတိုင်းထည့်ပြီးမှ ကျွန်တော့်လီးကိုပြန်ထုတ်ပြန်သွင်းအဲဒီလိုမျိူးလုပ်ပေးနေတော့ “ကောင်လေးရယ်ဘာလုပ်နေတာလည်း မြန်မြန်သာဆောင့်လိုက်ပါတော့လားကွယ်ဒီမှာမောနေပြီကလေး“ “မြန်မြန်လေးဆောင့်ပေးစမ်းပါ“ “အားကောင်းလိုက်တာအန်တီရယ်“ “ကောင်လေးရယ်ဒီမှာလည်းအရမ်းကောင်းလွန်းနေပြီ“သူ့ဆီကထွက်နေတဲ့စောက်ရည်တွေနည်းတာမှ မဟုတ်တာပဲ ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပေးနေတယ် အန်တီဆီကတဟင်းဟင်းန့ထဲ က်ွလာပြီ ကျွန်တော်အန်တီကိုလေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် ဖင်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆောင့်ချင်သေးတယ်ဗျ သူ့ဖင်ကြီးကိုကိုင်ပြီးအားရပါးရဆောင့်ပေးလိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးအတူတူပြီးသွားတယ် ကျွန်တော်သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်ပြီးသူ့နောက်ဘက်ကလည်ကုတ်သားဖောင်းဖောင်းလေးကိုပါးစပ်လေးနဲ့ထိ ကပ်ပေးထားတယ် အန်တီ့အသက်ရှူသံပြင်ပြင်းကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်။
“မနေ့ညနေကအန်တီကိုမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်လိုးချင်လိုက်တာအန်တီရယ်“ “အမလေးမနေ့ကအရမ်းနှုံးသွားလို့ထမင်းစားပြီးမှထွက်ထိုင်နေတာနော် ကောင်လေးကိုစောင့်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်“ “ကျွန်တော်အဲဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအန်တီရဲ့အန်တီ့ကိုမြင်လိုက်တော့အန်တီကိုဖက်ပြီးစကာတွေပြောချင် တာကိုပြောတာ“ “ကောင်လေးဒီနေ့ဘာစားပြီးပြီလဲ“ “ဒီနေ့လားကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခေါက်စားပြီးပြီလေ“ “ဟင်းဟင်းတော်တော်တတ်နေတယ်ပေါ့လေဟုတ်လား“ အန်တီပက်လက်လှန်လိုက်တယ် ကျွန်တော်မျက်နှာတ၀ိုက်ကိုနမ်းတယ် ဆံပင်တွေကိုထိုးဖွပေးတယ် အန်တီ့လက်တေနွ့ ကျွဲန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံးကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဖက်ထားတယ် “ကောင်လေးကိုအရမ်းချစ်တယ်သိလား“ “ကောင်လေးမရှိရင်တို့နေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးသိလား ညတုန်းကဆိုရင်အိပ်လို့တောင်မပျော်ဘူး“ “ကျွန်တော်လည်းအိပ်မပျော်ဘူးအန်တီ“ “မနေ့ကဖြစ်ခ့တဲာတေကွိုစဉ်းစားနေတာအန်တီရဲ့“။
“အဲဒီလိုစဉ်းစားတော့စိတ်တွေကြွလာတယ်ဆိုပါတော့“ “ဒါပေါ့အန်တီရဲ့ အန်တီန့ပဲ အဲ ချိန်တိုင်းနေချင်တာပဲဖြစ်နေတာအန်တီရဲ့“ “တို့လည်းကောင်လေးဖြစ်သလိုပါပဲ“ အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့အန်တီ့အသံကတိုးတိုးလေး အန်တီ့ပါးဖောင်းဖောင်းလေးကိုဖွဖွလေးနမ်းလိုက်တယ် အန်တီမျက်လုံးတွေကိုမှေးပြီးတော့ကျွန်တော့်ရဲ့အပြစ်ကင်းကင်းအနမ်းတွေကိုခံစားနေတယ် “ကျွန်တော်ကိုလုပ်ချင်တာထက်ချစ်ချင်လာတယ်သိလားအန်တီ” ”တို့လည်းမင်းလိုပါပဲ ကောင်လေးရယ် ကောင်လေးကိုတို့ရင်ထဲမှာအမြဲထည့်ထားချင်လိုက်တာ” အဲဒီစကားပြောပြီးတော့အန်တီ့မျက်ဝန်းတွေထဲမှာမျက်ရည်တွေဝဲ့တက်လာတယ် မျက်လုံးကိုတစ်ချက်မှိတ်လိုက်တော့မျက်ရည်တွေစီးကျလာတာမြင်ရတော့ကျွန်တော်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွား တယ် “အန်တီဘာလို့ငိုနေတာလည်းဟင် ကျွန်တော်ဘာများအမှားလုပ်လိုက်မိလို့လဲ” “ကောင်လေးမှာအပြစ်ရှိလို့ငိုတာမဟုတ်ပါဘူး တို့ကောင်လေးကိုချစ်လွန်းလို့ငိုနေတာလေ“။
ကျွန်တော်နားမလည်တော့ဘူးဗျာ ကျွန်တော့်ချစ်သူကြီးကကျွန်တော့်ကိုချစ်လို့ငိုတာတဲ့ အန်တီ့မျက်ရည်တွေပေါ်မှာကျွန်တော့်မျက်နှာကိုအပ်ထားလိုက်တယ် အန်တီကုတင်ပေါ်ကဆင်းပြီးထဘီကိုကောစွတ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ရှားထားလိုက်တယ် အင်းကျီန့ဘဲ ရာဇီယာမ၀တ်တော့ဘူး “ထမင်းမစားဘူးလားကောင်လေး“ “မစားချင်သေးပါဘူးအန်တီရယ် အန်တီ့ကိုပဲစားချင်တယ်“ မျက်စောင်းတစ်ချက်ဒိုင်းခနဲထိုးလိုက်ပြီးမှ “တော်တော်တတ်နေတယ်ဟုတ်လား ဒီကအကောင်းပြောတာကို“ “ခဏနေပါဦးအန်တီရယ်အန်တီကိုဖက်ထားချင်လို့ပါအန်တီရယ်“ ကျွန်တော်ကုတင်အေက်ကိုရောက်နေတဲ့အန်တီလက်ကိုဆွဲယူပြီးကုတင်ပေါ်ကိုတက်ခိုင်းလိုက်တယ် လဲခိုင်းပြီးတော့မှအန်တီပါးပြင်တွေကိုနေရာလပ်မကျန်အောင်နမ်းလိုက်တယ် ထဘီရင်ရှားထားတာကိုလည်းဆွဲချွတ်လိုက်တာပေါ့လေအန်တီ့ပေါ်ကိုတက်ခွပြီးမှိန်းနေလိုက်တယ် အန်တီ့လက်တွေကကျွန်တော့်ကျောတွေပေါ်ကိုပွတ်ပေးနေတယ်။
အသာလေးပဲငြိမ်ခံနေလိုက်တယ် အန်တီ့နှခေါင်းဝကအသက်ရှူနေတ့ထဲ က်ွလေလေးကိုကျွန်တော်အမိအရလိုက်ရူနေလိုက်တယ် အန်တီ့ပါးနှခမ်းသားတေကွိုလျှာန့သဲ ပ်ပေးနေလိုက်တယ် အန်တီယားလာလို့ထင်တယ် “ဟိတ် ကောင်လေး အဒဲီလိုမလုပ်န့ေဲ လဒီမှာယားလို့“ “အန်တီကအရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲနော်” “ကောင်လေးကပိုပြီးချစ်ဖို့ကောင်းတာပါနော်“ “တို့ရင်ထမှဲာကလေးန့ဒဲီလိုမျိူးမပတ်သတ်ခင်ကတည်းက ကောင်လေးလမ်းပေါ်မှာဆော့နေတာကိုမြင်ရင်ပါးလေးကိုအရမ်းနမ်းချင်နေတာသိလား“ “ပါးကိုပဲလားအန်တီ“ “တို့ကအကောင်းပြောနေတာနော် အဲဒါတွေမပါနဲ့” “ကျွန်တော်လည်းအန်တီ့ကိုအဲဒီလိုဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုတာကိုအန်တီသိပါတယ်နော်“ “သိပါတယ်အိမ်သာကျင်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတို့ဖင်ကိုမြင်ပြီးတော့လုပ်ချင်နေတာမဟုတ်လား“ “အန်တီခုတောင်လုပ်ချင်လာပြီအန်တီရယ်“ “ကောင်လေးရယ်ထမင်းလေးဘာလေးစားရအောင်လေ” ”ထမင်းကစားစရာမလိုဘူးလေအန်တီရယ်။
အန်တီ့ကိုစားရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာကိုအန်တီသိပါတယ်နော် “ဟာမရဘူးတို့ကတော့ထမင်းစားမှဖြစ်မယ်“ ”ဟုတ်ပါပြီအန်တီရယ်ဒါဆိုရင်လည်းအန်တီပဲစားတော့သိလားကျွန်တော်ကစားကိုမစားချင်တာ“ ”အေးဒါဆိုရင်လည်းတို့ကတော့စားလိုက်ပြီနော်” ကျွန်တော်ထမင်းမစားချင်လို့အိပ်ယာပေါ်မှာနှပ်နေလိုက်တယ် အန်တီ့ထဘီတန်းပေါ်ကအတွင်းခံဘောင်းဘီလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ဝတ်ကြည့်လိုက်တယ် လီးတဲ့မှပဲ ဘောင်းဘီကြီးကကြီးလိုက်တာ ကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှာအဲဒါကြီးကကြီးလွန်းနေတယ် ခပ်တည်တည်န့ကျွဲန်တော်အဒဲါကြီးကိုဝတ်ပြီးနေလိုက်တာပေါ့ အန်တီထမင်းစားပြီးလို့ပြန်ဝင်လာတယ် ကျွန်တော့်ကိုမြင်တော့ဟက်ဟက်ပက်ပက်က်ိုရယ်နေတယ်ဗျာ “ဘာလဲအန်တီရယ်ကြည့်လို့မကောင်းဘူးလား“ “ဟိုဟာလေးကိုတောင်မမြင်ရပါလားကလေး“ “အန်တီကအဲဒါလေးကိုမြင်ချင်ရင်လည်းလွယ်လွယ်လေးပဲလေ ဒီမှာလေ“။
ကျွန်တော့်လီးကိုဘောင်းဘီကြားကနေဆွဲထုတ်ပြီးမှပါးစပ်နဲ့ငုံခဲထားတော့ကျွန်တော့်လီးပြန်တောင်လာတယ် အန်တီကသဘောတွေကျနေတယ် ကိုင်တောင်လေးလို့ပြောပြီးပြုံးနေတယ် ခပ်ဖွဖွလေးစုပ်ပေးနေတာကောင်းလိုက်တာဗျာ လီးကိုကိုင်ပြီးတော့သူ့ပါးလေးနှစ်ဘက်ကိုတောင်တဖတ်ဖတ်ရိုက်လိုက်သေးတာ လီးတစ်ချောင်းလုံးကိုကိုင်ပြီးတော့ပေါ်အောက်ကိုလျှာနဲ့ယက်ပေးနေတာကျွန်တော့်မှာပြီးချင်တာကိုတောင် ထိန်းနေရတယ် ဥတွေကိုစုပ်လိုက်တာကျွန်တော့်မှတက်သွားမလားတောင်အောက်မေ့ရတယ်ဗျာ အပျိူကြီးအရှက်မရှိနိုင်တော့ဘူး “အန်တီကျွန်တော့်အပေါ်ကိုတက်လိုက်လေ“ ဖင်နှလုံးကြားကစောက်ပတ်ကိုကျွန်တော်ငုံထားလိုက်တယ် အန်တီကကျွန်တော့်ပေါင်ကြားမှာခေါင်းထိုးပြီးတဟင်းဟင်းနဲ့အသံတွေပိုကျယ်လာပြီ “အန်တီကျွန်တော့်အပေါ်ကတက်ဆောင့်ပေးနော်“ ကိုယ်ကိုတစ်ပတ်လှည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ။
ကျွန်တော့်လီးကိုကိုင်ပြီးစောက်ပတ်အ၀တည့်တည့်မှာတေ့ပြီးစောက်ပတ်အကွဲကြောင်းကိုအပေါ်အောက် ပွတ်ဆွဲနေလိုက်တာ စောက်ရည်တွေတရွှဲရွှဲနဲ့ဆိုတော့စောက်ပတ်အ၀နားလေးကိုထိလိုက်တိုင်းကျဉ်ခနဲပဲ ပြီးတော့မှလီးကိုထည့်ပေးပြီးတော့အပေါ်ကနေဆောင့်ပေး ကျွန်တော်ကအန်တီ့ပေါင်အောက်ကလက်လျှိုပြီးတော့ဖင်လုံးကြီးကိုကိုင်ပြီးထိန်းပေးထားတယ် “ကောင်လေးကောင်းလားဟင် အား“ “အဲဒီလိုပေးလုပ်ပါအန်တီရယ် အန်တီစောပတ်နှခမ်းအပြင်နားကိုရောက်ရင်ညုစ်ပေးပါဦး“ ကောင်လေးတို့ပြီးတော့မယ်နော် ကောင်လေးမပြီးသေးဘူးလား ပြီးတော့မယ်အန်တီရယ် မြန်မြန်ဆောင့်ပေးပါ ကျွန်တော်သူ့ဖင်ကိုကိုင်ပြီးတော့ဆောင့်ချပေးလိုက်တာ ပြီးသွားတယ် လရည်တောင်မှမထွက်ချင်တော့ဘူး အန်တီလည်းအသက်ပြင်းပြင်းရှူလို့ ကျွန်တော့်လက်တေကွ ပြီးတ့ဒဲ ဏ်ကိုမခံနိုင်လို့သူ့ဖင်ကြီးကိုဖြစ်ညုစ်ထားရတယ် အန်တီလည်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်မှာမှောက်ရက်ကြီးပြိုဆင်းလာပါတော့တယ်……ပြီးပါပြီ။
မ မုန်း ရက် ပါ ဘူး မောင်